Ukungavisisani phakathi kwabatshatileyo malunga nolwaluko- Rabbi Michael Avraham
Ingxabano phakathi kwabatshatileyo malunga nolwaluko
Iimpendulo > Udidi: Ngokubanzi > Ingxabano phakathi kwabatshatileyo malunga nolwaluko
Iphayina Ubuzwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Molo Rabhi kunye neeholide ezimnandi,
Ukuba kukho imbambano phakathi kwabazali ababini malunga nokwaluka komntwana. Ngokomthetho kunye/okanye ngokokuziphatha, ngaba umntu ofuna ukwaluka kufuneka avunyelwe ukuba alenze? Okanye ngaba le meko ifanele imiswe yaye umntwana akhethe xa sele ekhulile?
Kuxhomekeke ekubeni zaziyintoni na izivumelwano phakathi kwesibini kwasekuqaleni (xa babetshata). Ukuba akukho mvume ecacileyo kwaye ayinakugqitywa entolongweni (umzekelo, isiko eliqhelekileyo kwindawo yabo) njl., ngoko kubonakala kum ukuba ngokuziphatha umntu kufuneka avumele umntwana ukuba akhethe xa ekhula.
IsiTshayina kunye nenyumba Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ukuziphatha kumgaqo wonqulo akunjalo?
Yaye ukuba kukho ungquzulwano phakathi konqulo nokuziphatha apha, ngaba uya kusebenzisa ulwazelelelo ngommandla uze ukhethe imilinganiselo yokuziphatha? (Enyanisweni, kutheni ungazisebenzisi ezi zinto ngokubanzi kusana? Umzekelo kwiindawo apho umthetho okanye uluntu lungavumelani negama)
Unqulo ngokuqinisekileyo akunjalo. Yaye ukuba ukuchasa kukamama kuhlutha imbopheleleko kayise?
Ndandingawuqondi umbuzo ongentsimi. Yintoni unxibelelwano?